किन भयो अस्तव्यस्त यातायात व्यवस्था कार्यालय ? « Postpati – News For All
किन भयो अस्तव्यस्त यातायात व्यवस्था कार्यालय ?
कात्तिक २९, ललितपुर । यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना बिचौलियाको घेराबन्दीबाट अझै उम्किन सकेको छैन । बिहीबार गोरखापत्रको स्थलगत रिपोर्टिङ टिम कार्यालय पुग्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती, बिचौलियालाई मस्ती देखियो ।
यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मण दर्नालले लेखेका छन् । बिचौलियाबाटै बार्गेनिङ हुने भएपछि कर्मचारीलाई टाउको दुःखाइको विषय छैन । कार्यालयको प्रवेशद्वारमै “छिटो लाइसेन्स निकालिदिन्छु, लाइन बस्नु पर्दैन, लिखित र ट्रायलमा पास गराइदिन्छु” भन्नेहरूको तानातानमा पर्छन् सेवाग्राही ।
कार्यालय निकै अस्तव्यस्त देखिन्छ । वरिपरि भीडभाड छ । कोलाहल छ । धुलोधुवाँ र अव्यवस्थित पार्किङले मान्छे धेरै समय बस्नसक्ने अवस्था छैन । लामको व्यवस्थापन छैन, महिला पुरुषको लाम एउटै छ । कार्यालयका संरचनाहरू महिला र अपागङ्तामैत्री देखिँदैन । शौचालय अत्यन्त दुर्गन्धित छ । भ¥याङका भित्ताहरूमा गुट्खा चपााएर थुकिएको छ तर सरसफाइको कुनै प्रयास छैन ।
सेवाग्राहीको स्वास्थ्य वा सुविधालाई चासो दिएर कार्यालयको व्यवस्थापन छैन । अर्घाखाँची अर्घातोषका प्रदीप कुँवर यातायात कार्यालय धाएको तीन दिन भइसक्यो । लाइसेन्सको ग्रेड ‘ए’ र ‘बी’ दुवै उत्तीर्ण गरे पनि नवीकरण गर्ने बेलामा पास गरेको प्रमाण नभेट्टाएपछि पटकपटक धाउनु परेको छ ।
रेकर्ड नभेटिने, प्रमाण फरक पर्ने समस्याले सेवाग्राही हैरानीमा छन् । तर यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख डम्बरबहादुर चन्द भने विगतको तुलनामा सुधार भएको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले ‘अनलाइन’ प्रणाली छ । प्रक्रिया सुरु भएपछि पद्धतिमा काम हुन्छ । पुराना १०÷१५ वर्षअघिका दस्तावेजमा आधिकारिक प्रमाणको अभाव छ । प्रमाणबिना हामीले नवीकरण गर्न सम्भव छैन । सेवाग्राही भन्नुहुन्छ, हाम्रो के गल्ती छ । हेर्छौं, उहाँहरूको कुरा पनि जायज छ । ”
कार्यालयले ७७ वटै जिल्लाका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्छ । दैनिक तीन हजारलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को परीक्षा लिने, नयाँ लाइसेन्स वितरण तथा नवीकरण गर्ने काम कार्यालयले गर्छ ।
सेवाग्राहीको चापले बेथिति बढेको हुनसक्ने उहाँको दाबी छ । चन्दको प्रतिबद्धता छ, “कार्यालयलाई चुस्तदुरुस्त राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । पहिलाको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ, अझै गर्छौं । बिचौलियाहरूको बिगबिगी हटेको छ । हामी नियन्त्रण गर्छौं ।
अनलाइनमा काम गर्दा केही प्राविधिक समस्या पनि हुने भएकाले अप्ठेरो परेको छ, हामी छिटो काम गरिदिने अभियानमै छौँ ।” कार्यालयका अनुसार २५ प्रतिशत काम अझै पनि अनलाइनमा लैजान सकिएको छैन ।
पुराना ढड्डाहरूलाई अनलाइनमा राख्न खोजिएको छ । दिनको दुई/तीन पटक अनलाइन सिस्टमले काम नगर्ने भएकाले पनि दिनहँु सास्ती भोगिरहेको छ कार्यालयले । तर विभागले आफ्नै सफ्टवेयर निर्माण गर्न लागेको चन्दले जानकारी दिनुभयो ।
अनेक सास्तीका बीच यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि सेवाग्राहीले अर्को सास्ती भोग्नुपर्छ । लाइसेन्स उत्तीर्ण भएको डेढ वर्षसम्म लाइसेन्स नपाउने समस्या वर्षौंदेखि उस्तै छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले अहिले पनि छ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीको लाइसेन्स दिन सकिरहेको छैन । सेवाग्राहीले डेढ वर्षसम्म लाइसेन्स कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
२९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार को दिन प्रकाशित